Degmooyinka Iswiidhan qaarkood oo diiday soo galootiga cusub guri la’aan jirta awgeed | Somaliska
Iyadoo ay soo sanadkaan bilihiisii hore soo baxeen sharciyo adag oo adkeeynaya in magangalyo doonka helaan sharci deganaansho, ayaa hadana waxaa jirta in badan oo iyaga ka mid ah oo la siiyey sharci joogta ah kuwaasi oo ay heeyso guri la’aan baaxad leh.
Degmooyinka dalka ayaa qaarkood afka furtay waxaana ay sheegeen ineeysan awoodin in ay qaataan soo galooti cusub oo dejiyo deegaanadooda. Waxaa ka mid ah degmooyinkaasi Ekerö oo ku taala banaanka magaaladda caasimadda ah ee Stockholm iyo degmadda Varberg oo ku taala deegaanadda Västra Götaland ee galbeedka Iswiidhan.
Adam Reuterskiöld, oo xisbiga M ka tirsan ahna madaxda maamulka degmadda Ekerö, ayaa warqad uu diray xafiiska shaqadda ee AF-ka iyo laanta socdaalka ku sheegay in degmadu raaci karin sharuucdii horey u degsanaa ee ahaa qabaabilaada soo galooti cusub. Waxaa uu farta ku fiiqay in ay hakad gelinayaan qaadashada soo galootiga tan iyo inta la dhisayo guryo cusub xilli magaaladdu ay la daala dhaceeyso guryo la’aan baaxad leh oo soo wajahay.
Sidaas si lamid ah ayaa degmadda Varberg waxaa ay sheegtay ineey hakineeyso qaadashada dadyowga cusub. Qeeylo dhaanta degmooyinka ayaa imanaya xilli maamulka degmooyinka iyo goboladda dalka ee SKL ay sadex toddobaad ka hor soo saaray digniin la xirriirta baahida xagga guryaha iyo sida ay degmooyinka u doonayaan in lugu soo daabulin soo galooti cusub.
Dhinaca kale wasiiradda shaqada iyo dib u dejinta Ylva Johansson, ayaa iyadoo ka qeyb galeeysa barnaamijka Agenda ee ka baxa telefeeyshinka SVT,maalintii axada ee ina soo dhaaftay, sheegtay in ay ku xisaabtameeyso in degmooyinku raaci doonaan sharciga, hase ahaatee waxaa ay tilmaamtay ineeysan jirin cuna qabateeyn ama digniino la siiynayo degmooyinka diida soo galootiga.
Ugu dambeyntii waxaa ay wasiiradu sheegtay in xaggeeda muhiim tahay in mas’uuliyada la wada qaato ee aan la isku tuur tuurin, saas oo ay tahayn beey tiri wasiirada waxaa jira degmooyin masu’uuliyad weyn isa saaray halka kuwo kalena aaneeyba qaadan masu’iiliyadii looga fadhiyey.